Ukuthi umbango wamandla uzithinta kanjani lezi zithandani | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 08/06/2021 22:00 | Ubudlelwano
Amandla imvamisa ingesinye sezizathu zezingxabano noma izimpi emibhangqwaneni eminingi. Izimpi zamandla zihlale futhi zijwayelekile, into engabasizi ngalutho abashadikazi uqobo. Izinto ziba zimbi kakhulu lapho iqembu elithola amandla lisebenzisa lona ukuze lisizakale futhi lingalisebenzisi ukwenza ngcono ubuhlobo nelinye iqembu.
Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma ngomzabalazo wamandla kulaba abashadile futhi kungalimaza kangakanani ubudlelwano.
1 Umzabalazo wamandla kulezi zithandani
2 Izinkinga ngenxa yombango wamandla kulezi zithandani
Umzabalazo wamandla kulezi zithandani
Ukusabalalisa amandla ngaphakathi kwezithandani akuyona into elula noma elula. Kumele ubheke izidingo zabantu bobabili futhi uma lokhu kungenzeki, kungenzeka ukuthi izinto zizophela kabi. Into ejwayelekile ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, amandla ashiwo ngenhla ayalinganiswa futhi umuntu ngamunye uwasebenzisa ngokufanele ngezikhathi ezithile.
Akunakuba ukuthi ebuhlotsheni obuthile, ngumuntu oyedwa kuphela onalawo mandla kanti elinye iqembu limane lilinganisele ekwamukeleni izinqumo zomunye. Ngokuhamba kwesikhathi, ukubusa okunjalo kungadala ukulimala okukhulu kumlingani futhi kubangele ukuthi ubuhlobo buthakathaka ngendlela eyingozi.
Izinkinga ngenxa yombango wamandla kulezi zithandani
Umzabalazo wamandla owenzeka njalo ngaphakathi kwezithandani, kungadala inqwaba yezinkinga:
Kungenzeka ukuthi umzabalazo wamandla ungenxa yokuthi laba bantu ababili bafuna ukuthatha indima ephezulu. Bobabili abantu bafuna ukulunga ngaso sonke isikhathi, okwenza izingxabano nokulwa ngazo zonke izikhathi zosuku. Akekho kubo onikela ngengalo yakhe ukuze aphenduke futhi lokhu kwenza ukuhlala ndawonye kube nzima kakhulu futhi kube nzima. Kulezi zimo kubalulekile ukuzwelana nobukhulu nomlingani wakho bese uzibeka ezicathulweni zenye.
Ngendlela efanayo, izingxabano ezahlukahlukene zingavela esimweni lapho kungabikho muntu ngaphakathi kombhangqwana, ufuna ukuthatha amandla nokubusa. Ukuntuleka kokuphepha kwabashadikazi kungaphezu kokusobala futhi lokhu kugcina kulimaze ubudlelwano uqobo. Kulokhu, kubalulekile ukudalula imibono eyahlukene bese kusuka lapho uthathe isinyathelo ngokuhlanganyela.
Ngamafuphi, umzabalazo wamandla ngaphakathi kwezithandani ungathathwa njengokujwayelekile futhi akufanele ube mubi, inqobo nje uma ukubusa namandla kangako kungalimazi kwenye ingxenye yombhangqwana. Kufanele kube khona ukulinganisela emandleni umuntu ngamunye anakho ebudlelwaneni. Okungakulungele umbhangqwana ukuthi lokhu kwabiwa kwamandla kuyisizathu sezingxabano eziqhubekayo zazo zonke izinhlobo.
Uma lokhu kwenzeka, kungakuhle ukuthi nihlale phansi nixoxe ngomoya ophansi futhi nisungule uchungechunge lwezivumelwano ngokuya ngokuthi ngubani ophethe phakathi kwalabo abashadile. Ngokufanelekile, amandla azoshintsha izandla ngokuya ngezinqumo ezahlukahlukene okufanele zenziwe ebudlelwaneni. Ngaphandle kwalokho isimo singalawuleka ngazo zonke izinto ezimbi ezibandakanya lokhu kwabashadikazi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Ukuthi umbango wamandla ubathinta kanjani laba abashadayo